Robitel's 'Escape Room' Trailer-ku waa daaweyn khiyaano leh - iHorror
Bogga ugu weyn Warar Naxdin Leh Robitel's 'Escape Room' Trailer-ku waa daaweyn khiyaano badan
Robitel's 'Escape Room' Trailer-ku waa daaweyn khiyaano badan
Waa taabasho heer sare ah oo loo yaqaan 'trailer' oo lagu furayo Malvina Reynolds '' Box-yada Yar '' ee filimka ku saabsan dadka isku dayaya inay ka baxsadaan iyaga oo adeegsanaya caqligooda oo keliya.
Kaasi waa kan loo dejiyey Adam Robitel ee sida saxda ah loogu magacaabay Qolka baxsiga kaas oo tagi doona tiyaatarada bisha Janaayo 2019. Robitel wuxuu ahaa midka daawan jiray tan iyo intii uu Qaadashada Deborah Logan noqday ku dhufasho dhaqan. Wuu raacay taa isagoo si weyn u guuleystay Khiyaano: Furaha Ugu Dambeeya.
Marka laga fiiriyo filimkiisii ​​ugu dambeeyay, wuxuu la socdaa mowduuca ka sarreeya laakiin wuxuu ku darayaa sheekooyin qalloocan oo isku beddelaya qaab xujooyin muuqaal ah. Haddii ay dhacdo inaad shalay dhalatay cinwaanku wuxuu loola jeedaa ifafaale bulsheedkii ugu weynaa tan iyo karaoke.
Ciyaarta dhabta ah waxay ka bilaabaneysaa iyadoo koox dad ah la dhigo qolka mawduucyada leh waqti go'an oo loo qoondeeyo si ay u helaan waddo looga baxo ka hor inta aan alaarmiga qaylin. Robitel ayaa qaadatay fikirkaas oo ka dhigtay mid shaki badan iyo cabsi badan.
Waa tan soo koobitaan rasmi ah:
“Qolka Qaxootiga waa riwaayad maskaxeed oo ku saabsan lix qof oo aan aqoon oo iyagu ku dhaca xaalado ka baxsan awoodooda waana inay adeegsadaan caqligooda si ay u helaan tilmaamaha ama u dhintaan. ”
Qolka baxsiga waxaa lagu furi doonaa tiyaatarada Janaayo 2019.
Trailer-ka 'Creep Nation' wuxuu tijaabin doonaa kalsoonida aad ku qabto amniga shisheeyaha
iHorror Oktoobar Filim Marathon: Toddobaad 4